माघ २०, २०७३
मूलधारका दलहरू मधेसी दलसँग झस्किनुपर्ने अहिले कुनै कारण छैन । त्यस्तै मधेसी नेतृत्व तर्सिनु भनेको पनि आफ्नै अकर्मण्यताबाट मात्र हो ।
जीवनका सहयात्री सहयोगी सामग्री
शरीरको कुनै पनि भागमा समस्या आएर आफ्नै अङ्गले काम गर्न नसक्ने भएपछि परिस्थितिलाई सहज बनाउन व्यक्तिपिच्छे कुनै न कुनै सामग्रीको आवश्यकता पर्छ ।
भारतीय संविधानका निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘बाघको पुच्छरको रौं बन्नुभन्दा बिरालोको शिर बन ।’
संघीयताको भ्रूण नै हत्या ?
कसैको चाहना वा असहमति वा विद्रोहको घुर्कीले मुलुक संघीयताबाट तत्काल पछाडि फर्कने कुनै सम्भावना छैन । संघीयता हाम्रो मुलुकमा आवश्यक थियो वा थिएन जस्ता सवाल अहिलेका लागी बौद्धिक विमर्शका विषयमात्र हुन् ।
वित्तीय जोखिम बढ्न नदेऊ
मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा परम्परागतभन्दा फरकखाले तरलता अभावको अवस्था देखिएको छ । तरलता अभाव देखाउने मुख्य सूचकहरू हेर्दा समस्या ठूलो देखिँदैन ।
‘माघ–१९’ र अहिले
किन आजकल प्रतिगमनको खतरा बारेमा चर्चा हुन थाल्दै छ ? किन जनताले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा पैदा हुँदै छ ?
‘कू’ लाई नभुलौं, गल्तीहरू सच्याऔं
अहिले परिवर्तनका मुद्दामाथि जे–जसरी उल्टो बहस गर्न खोजिँदै छ, त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सकारात्मक सूचक होइन । नेतृत्वले यसलाई समयमै ठम्याएर आफ्ना गल्ती नसच्याउने हो भने सम्भावित जोखिम टर्नेछैन ।
तरलता संकट र पुँजीगत खर्च
पुँजीगत बजेट खर्च अब राज्यको मात्रै चासो र चिन्ताको विषय रहेन । सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै ठप्प बनाउने यो विषय सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
उपकुलपति चयनका कुटिलता
डा. मनप्रसाद वाग्ले
नेपालका विश्वविद्यालयहरू राजनीतिले ग्रस्त छन् र उच्चशिक्षा ओरालो लाग्ने क्रममा रहेको छ ।
सरस्वतीलाई सम्झने दिन
प्रा. वीणा पौड्याल
महाभारतको मङ्गलाचरणमा सरस्वतीलाई प्रणाम गरी ग्रन्थको प्रारम्भ गरिएको छ । आज विद्याकी देवीको रूपमा सम्मान पूजा गरिने सरस्वती देवी वैदिक समयमा पवित्र नदीको रूपमा स्थापित थिइन् ।
लिङ्ग पहिचान : भ्रम र यथार्थ
प्रा.डा. बेनु लोहनी / डा. सुजित कुमार झा
‘घट्दै बालिकाहरू’, ‘छोरीलाई गर्भमा थुनछेक’, ‘लिङ्ग पहिचानपछि छोरी भए गर्भमै हत्या’ प्राय:जसो सञ्चार माध्यममा झुल्किने यी समाचारहरूबारे हामी कोही अनभिज्ञ छैनौं ।
माघ ५, २०७५
माघ ४, २०७५
डा कृष्ण भट्टचन माघ ४, २०७५